इटहरी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार » Purbihotline
इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले घुस लिएको र भ्रष्टाचार गरेको बारेमा पटक पटक सञ्चार माध्यममा समाचार आउने गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका केही कर्मचारी घुस बिना काम गर्दैनन् भन्ने गुनासाहरु इटहरीबासीले गर्ने गरेका छन् । इटहरीका एक व्यक्तिले आप्mनो नाम नबताउने सर्तमा भने इटहरीका केही कर्मचारी भ्रष्ट छन् । हामीले तिरेको करबाट तलव खाने अनि फेरी हामीसंग निर्लज्ज ढंगले घुस माग्ने गर्दछन् । इटहरीका पुराना बासिन्दाले गुनासो पोख्दै भने– घर नक्सा वापतको रकम इटहरी उपमहानगरपालिकामा बुझाई सकेपछि जग्गा छुट्याउन अमिन ५ बजे आए, जग्गा नाप गरी छुट्याए । अनि ५ बजे पछि ओभर टायम हुन्छ भनेर निर्लज्ज ढंगले २ हजार मागे’ इटहरीवासी भन्नुहुन्छ मैले घरनक्सा वापतको पैसा उपमहानगरपालिकामा भुक्तानी गरिसकेपछि फेरी केको लागि पैसा दिने ? अमीनले मोटरसाइकलमा तेल हाल्नु पर्छ, ड्युटी १० देखि ५ सम्म मात्र हो । दिउँसो कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ, बिहान र बेलुकाको समय पारेर जग्गा छुट्याउने हो हामीलाई उपमहानगरपालिकाले ओभरटाइम दिँदैन । आदी नाना थरीका बाहानाबाजी गरेर दुईहजार रुपैयाँ लिएरै छाडेको बताए । केही वर्ष अघि इटहरी उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचरीलाई अख्तियारका कर्मचारीले इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडी घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गरेका थिए । सोलार बत्ती जडानमा कर्मचारीले लाखौ रकम घोटाला गरेको समाचारले देशव्यापी रुपमा चर्चा पाएको थियो । इटहरीका कर्मचारीहरुले विभिन्न शिर्षकमा रहेको रकम कार्यक्रम नगरी बिलभरपाई मिलाएर खाने गरेको अर्थात् एउटा कार्यक्रममा अर्को कार्यक्रमको हस्ताक्षर फाराममा पनि खुसुक्क सही गराए बिल मिलाएर खाने गरेका गुनासाहरु पनि यदाकदा आउने गरेका छन् । यस्ता अनियमितता कति छन् कति ? यो अनियमितता रोक्ने प्रयासमा रहेका इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई हाल विवादमा तानिएको अवस्था छ ।
द्वारिकलाल चौधरीले मेयरमा विजय भए देखिनै घुस र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आउनु भएको छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारमा पनि मेयरको नाम नमुछिएको भने होइन तर मेयर चौधरी निकट दौतरीहरु, मेयर चौधरीसंग रहेर काम गर्ने अन्य नेता तथा कर्मचारीहरुसंग बुभ्mदा मेयर चौधरीको दिल सफा छ । उहाँ घुस, भ्रष्टाचार गर्ने कुरा होइन घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्नेको विरोधमा हुनुहुन्छ । मेयर चौधरीले आजसम्म घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने काम नगरेको इटहरीबासीबाट जानकारी आएको छ । मेयर चौधरी आफु घुस नखाने, काम गर्दा कमिसन नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने भएकाले घुस, भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका कर्मचारी तथा नेताहरुका लागि बाधक बन्नु भएको महसुस ती भ्रष्ट चरित्रका कर्मचारी तथा नेताले गरेका छन् । मेयर चौधरीले सेवाग्राहीसंग घुस लिएको भन्दै जेठ ८ गते सवओभरसियर राम खड्कालाई नगरपालिका परिसर भित्र गाली गलौंज सहित गलहत्याएर दुव्र्यवहार दूव्र्यवार गरेको आरोप लागेको छ । सो आरोपमा मेयर चौधरीले पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा के घुस खानेलाई फुलमालाले स्वागत गर्नुपर्ने भन्ने जबाफ दिनु भएको छ ।
मेयर चौधरी उपर कर्मचारीले कर्मचारी कुट्ने मेयर चाहिँदैन….. भन्ने जस्ता नारा लगाएको अवस्था छ । मेयर चौधरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाका नासु मनोज दाहाललाई कार्यकक्षमा बोलाई दुव्र्यवहार(कुटपिट ) गरेको भन्ने आरोप लाइएको छ तर मेयर चौधरीले भने आरोप स्वीकार गर्नु भएको छैन् । मेयरले कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेको बारेमा कर्मचारीहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा जाहेरी दरखास्त दिने, मेयर चौधरी मुर्दाबाद जस्ता नारा लाउने ? वडा कार्यालयहरु बन्द गराउने कार्य गरेका छन् ।
मेयर चौधरीको कार्यकाल करिव २ वर्ष पुग्न लागेको छ , उहाँको कार्यशैली हेर्दा जनप्रतिनिधि जसरी लचिलो हुनुपर्ने हो, चिप्लो कुरा गरेर जनतालाई भुल्याउने गुण उहाँमा छैन उहाँ स्पष्ट बक्ता हुनुहुन्छ । देखेको कुरालाई छलछाम नगरी स्पष्ट रुपमा भन्नु हुन्छ । उहाँको ब्रम्हले देखेका कुरा उहाँ स्पष्ट रुपमा राख्ने गर्नु हुन्छ । इटहरी उपहानगरपालिकाका मेयर चौधरी आफु घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि घुस खान नदिने, भ्रष्टाचार गर्न नदिने भएकाले मेयर र कर्मचारी विच विवादको जड यहीबाट शुरु भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर, वडाध्यक्ष, सदस्यहरु सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन् तर केही वडाध्यक्ष्य, सदस्यहरु बाहेक अरु सबै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा खर्च भएको रकम भ्रष्टाचार गरेर असुली गर्ने क्रममा रहेको उहाँहरुको कार्यशैली र घटनाक्रमले देखाएको छ ।
अब इटहरीबासीले सोच्ने समय आएको छ २०६२/६३ को आन्दोलनको उद्देश्य यही थियो त ? भ्रष्ट चरित्रका जनप्रतिनिधि र भ्रष्ट चरित्रका कर्मचारीले कमाउ धन्धामा लाग्दा मेयरले टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने ? जनताले तिरकेो करबाट तलव खाने कर्मचारीले सेवाग्राहीसंग घुस माग्दा मेयरले कारबाही गर्दा कर्मचारी सबै मेयर विरुद्ध खनिँदा हामी इटहरीवासी तै चुप मै चुप भएर बस्ने ? यो न्यायोचित भएन । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयरले घुस खाने कर्मचारीलाई प्रकृया पु¥याएर हटाउनु पर्ने थियो त्यो उहाँलाई जानकारी भएन् वा उहाँले ती घुस खाने कर्मचारीलाई हटाउनमा कसैले साथ नदिएकै कारणले मेयर चौधरले ठाडो कारबाही गर्न बाध्य हुनु भएको महसुस भएको छ । हो उहाँले गरेका असल काममा कसैको साथ नपाएकोले उहाँ आवेसमा आउनु भयो होला तर उहाँको सोच, भावना पवित्र छ । उहाँ चिप्ला कुरा जान्नुहुन्न, मुखले ठिक्क कामले दिक्क पार्न मान्नु हुन्न । उहाँको हाल सम्मको इटहरीवासी उपर गरिएको व्यवहारलाई कसैले गलत भनेको पाइँदैन । हरेक मानिसको दिमाग २४ घण्टामा करिव ५ मिनेट सुरले काम गर्दैन् त्यही अवस्थामा मेयरले कर्मचारी उपर ठाडो काबाही गर्नु भयो होला । उहाँलाई सल्लाह दिनेले सही सल्लाह दिनु भएन होला । घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि जो सुकै होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । उहाँले प्रकृया पु¥याएर कारबाही गर्नु पर्नेमा ठाडो कारबाही गर्नु भयो यसमा उहाँलाई अबका दिनमा कानुनी प्रकृयाका बारेमा सम्झाउनु पर्ने हुन्छ । सम्झाउने काम सल्लाहकारको हो, नयाँ संविधानले स्थानिय तहलाई धेरै अधिकार सुम्पिएको छ । मेयरलाई अधिकार हुनु पनि पर्छ । गल्ती गर्ने जो सुकै होस् उसलाई के कसरी कारबाही गर्ने मेयरका कानुनी सल्लाहकारले सही सल्लाह दिनुपर्छ । मेयरका सञ्चार सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार लगायत हरेक विषयमा फरक फरक सल्लाह चाहिने हुँदा त्यसमा सही व्यक्ति छनोट गरेर मेयरले उचित सल्लाह लिनुपर्छ ।
मेयर चौधरीले आगामी दिनमा संयमता अपनाएर काम गर्नुपर्छ, घुस खाने कर्मचारीलाई हटाउनु पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर प्रकृया पु¥याउनु पर्छ । मेयर चौधरीले अबका दिनमा स्वच्छ छवी भएका सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेर उहाँहरुको सल्लाह अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरु पनि कठिन अवस्थामा विषयगत सल्लाहकारसंग कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिएर काम गर्नुहुन्छ भने मेयर चौधरीले पनि आगामी दिनमा अप्ठयारो परिस्थिति अथवा घुस खाने तथा भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रकृया के छ ? सो विषयमा सल्लाकार ंग सल्लाह गर्ने र कानुन व्यवासायीको समेत साथ लिएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । इटहरीबासीले मेयर चौधरीको कामको सही मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ र काम गर्नमा साथ दिनु पर्छ । मेयर चौधरीले अतिक्रमण गरेको खेती खोला सफा गर्न खोज्नु भयो तर उहाँलाई आप्mनै पार्टीका एकथरी नेता कार्यकर्ता र काँग्रेस, राप्रपा, आदी पार्टीका नेताले काम गर्न दिनुभएन ।
मेयर चौधरीले कोशी राजमार्ग केन्द्रविन्दुबाट दुवै तर्फ ८५ फिट सडक कायम गर्न आप्mनै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र अन्य दलका नेता कार्यकर्ता र इटहरीका धनाढ्य व्यापारीहरुले बाधा अड्चन खडा गरेको अवस्था छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको विकासलाई दू्रत गतिमा अगाडी लैजान पनि केही त्यस्ता कमिसन खोरी, भ्रष्टाचारी आप्mनै पार्टीका कार्यकर्ता र अन्य पार्टीका भ्रष्टहरुले बाधा अड्चन खडा गरिरहेका छन् । यो समस्या इटहरीको मात्र होइन्, नेपाल भरीको समस्या हो तर हामी इटहरीबासीले देश भरिको वेथिति हटाउन सकिँदैन, कम्तिमा इटहरीको बेथिति हटाउन लाग्नु भएका मेयर चौधरीलाई साथ सहयोग दिनुपर्छ । मेयर चौधरीलाई राम्रो काम गर्न इटहरीबासीले साथ दिनुपर्छ र उहाँका असल कामको सही मुल्याँकन गरेर सही सुझाव सल्लाह दिनुपर्छ । इटहरीको विकास गर्न उहाँ लागि पर्नु भएको छ । उहाँले पार्टीको आज्ञाकारी होइन जनताको सेवक बन्न खोज्नु भएको मेयर चौधरीको कार्यबाट प्रष्ट भएको छ ।
नेपालीमा एउटा भनाई छ ‘सिगान पुछेको र नाक काटेको थाहा नपाउने’ भनेर यो भनाई मेयर चौधरीको वर्तमान परिस्थितिमा सान्दर्भिक बनेको छ । हामी इटहरीबासीले निस्वार्थ भावनाका, विकास प्रेमी मेयर पाएका छौं । मानिस हो, सर्वगुण सम्पन्न कोही पनि हुँदैन तर उहाँको उच्च मनोबल, उहाँको निस्वार्थ भावना, उहाँले चाहेको इटहरीको विकास आदीमा हामी इटहरीबासीले साथ दिनुपर्छ । काम गर्ने शिलशिलामा केही गल्ती हुन सक्छन्, उहाँका गल्तीलाई छलफलमा रोखर यो यसरी यो प्रकृयाबाट जानुपर्छ यसरी गइएन भने यस्तो समस्या हुन्छ भनेर उहाँलाई स्पष्ट रुपमा बताउनु पर्छ । मेयरलाई सबै प्रकृया थाहा नहुन सक्छ थाहा हुने, जानेका बुझेकाले उहाँको निस्वार्थ भावनाको उच्च कदरका साथ मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दै उहाँलाई कानुनी रुपमा कुन सही बाटो हो कुन गलत बाटो हो देखाई दिनुपर्छ । सही काम गर्नेलाई भ्रष्टहरु, घुस्याहाहरु, कालोबाजारी गर्नेहरुले सताउँछन्, काम गर्नमा बाधा अड्चन खडा गर्दछन्, काम गर्न दिँदैनन् । इटहरीका मेयर चौधरीको समस्या यही हो केही भ्रष्टचरित्रका पार्टीका नेता, कर्मचारीले कमिसन खान नपाउँदा, भ्रष्टाचार गर्न नपाउँदा मेयरका काममा बाधा पु¥याउँन खोजेका छन् । इटहरीबासीले विकास बिरोधी, भ्रष्टाचारी ? कमिसन खोर, घुस्याहाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नारा लाएर इटहरीको चोकचोकमा गल्लीगल्लीमा पुग्नु पर्छ की मेयर चौधरीलाई काम गर्न कही कतैबाट बाधा अड्चन नआउन् ।
मेयर चौधरीले कर्मचारी उपर हातपात गरेको भन्ने आरोप जहाँसम्म छ त्यो उहाँको आक्रोस हो । हामी इटहरीबासीले उहाँको कामको सही मुल्याँकन गर्न सकेनौ, उहाँलाई सही काम गर्न साथ दिएनौं त्यसैले उहाँ आजित भएर केही कडा शब्द बोल्नु भयो होला केही भन्नु भयो होला हामी इटहरीबासीले त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । मानिसहरुको फरक फरक खालको स्वभाव पनि हुन्छ उहाँको स्वभाव फरक खालको भएको मेयर भए देखिनै आम इटहरीबासीलाई ज्ञात भएकै हो । बोलीमा मिठास छैन होला, चिप्लो घस्न जान्नु हुन्न होला तर मेयर चौधरी समग्र इटहरीको विकास गर्न चाहनु हुन्छ । इटहरीबासीको मुहार फेर्न चाहनु हुन्छ । आफु घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि घुस खान, कमिसन खान र भ्रष्टाचार गर्नमा रोक लाउन चाहनु हुन्छ । के घुस नखानु, भ्रष्टाचार नगर्नु र गर्न नदिनु उहाँको गल्ती हो । कतिपय भ्रष्ट चरित्रका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि मेयर चौधरी बाधक बन्नु भएको छ । मेयरले भ्रष्टाचार गरिदिए पो आफुले पनि हिस्सा बाँडफाँड गर्न पाइन्थ्यो, भ्रष्टाचार गरेर करोडौं कुम्ल्याउन पाइन्थ्यो । मेयरले भ्रष्टाचार गर्न मान्नु हुन्न अनि ती भ्रष्ट चरित्रका नेता तथा कर्मचारीले उहाँलाई बद्नाम गराउने, काम गर्न नदिने । सहीकाम गरे पनि घुमाएर गलत काम गरेको हुइँया मच्चाउने गलत कार्य भएको पाइन्छ ।
इटहरीका मेयरसापले पनि अबका दिनमा काम गर्ने शिलशिलामा भएका साना तिना गल्ती कमिकमजोरीलाई सच्याएर लैजानु पर्छ र जुनसुकै काम गर्दा पनि तपाईलाई साथ दिने, तपाइँ र समग्र इटहरीको भलो चिताउने व्यक्तित्वहरुसंग छलफल गरेर काम अगाडी बढाउनु उचित हुनेछ । मेयरले सञ्चारकर्मी सँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ । पत्रकारले तपाईलाई अनावस्यक लागेका प्रश्न सोधिएको खण्डमा त्यसको उत्तर नदिन सक्नु हुन्छ तर पत्रकारलाई जहिले पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । पत्रकारलाई कम उमेरको धेरै उमेरको, आप्mनो पार्टीको अर्को पार्टीको भनेर आँकलन गर्नु हुँदैन । पत्रकारसंग तपाईले चलाखी पूर्ण ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ त्यसो भएमा तपाइँको लक्ष्य पुरा गर्नमा पत्रकारको साथ पाउनु हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा तपाईले इटहरी उपहानगरपालिकाभित्र कार्यरत पत्रकारको साथ सहयोग लिनु भयो भने तँपाईलाई समस्या पर्दैन । पत्रकारको काम नै जहिले पनि प्रश्न तेस्र्याउने हो त्यसबाट फाइदा लिन सक्नु पर्छ त्यसका लागि संचार सल्लाहकार तँपाईको साथमा रहिरहनु पर्छ । मेयर यू तँपाइले पत्रकारले जति सुकै प्रस्न गरे पनि सकारात्मक रुपमा लिई दिनुस् तँपाई संयमता अपनाइ दिनुस् त्यसको मुल्याँकन पाठक, श्रोता, दर्शकले गर्ने छन् । मेयरज्यू सबै कर्मचारी घुस्याहा छैनन्, सबै नेता भ्रष्ट छैनन् त्यसै गरी सबै पत्रकार तपाईको मानस पटलमा भए जस्तो वाइयात छैनन् । समग्र मुलुक र जनताको पक्षमा रहेर कलम चलाउने, इटहरीको भाग्य र भविस्य उज्वल हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर कलम चलाउने पत्रकार पनि छन् भन्ने सोचि दिनुस् ।
हामी इटहरीबासीले बुभ्mनु पर्ने कुरो के छ भने हामीले तिरेको करबाट तलव खाने कर्मचारीलाई जनताको सेवामा लाउने हो नत्र उनीहरु आप्mनो ठाउँ छाडेर अर्कोलाई ठाउँ खाली गरिदिनु पर्छ । घुस्याहा, भ्रष्ट कर्मचारी इटहरीवासीलाइ चाहिएको छैन जनताका छोराछोरी धेरै बेरोजगार छन् । अहिलेको युगमा एक से एक सक्षम, क्षमतावान कर्मचारी पाँइन्छ भ्रष्टाचारीलाई फुलको मालाले स्वागत गर्नुपर्ने र जनताको काममा कर्मचारीलाई घुस दिइरहनु पर्ने आवस्यक छैन । यो मुलुकमा कुलमान घिसिङ, प्रेम प्रसाद संजेल, मेयर द्वारिकलाल चौधरी, डा. गोविन्द केसी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की जस्ताको सम्मान गर्न, उहाँहरुको भावनाको कदर गर्न सक्नुपर्छ । हामीले घिसिङ, संजेल, चौधरी, डा. केसी, पूर्व प्रधानन्यायधीश कार्की जस्ता व्यक्तिको महान भावनालाई चिन्न सक्नु पर्छ । उहाँहरुले गरेका सही कार्यमा हामीले भित्री आत्मा देखिनै सही मुल्याँकन गरेर साथ दिनुपर्छ । उहाँहरुले गरेको कार्य भनेको समग्र मुलुक र जनताको लागि हो उहाँहरुको निजी जीवनमा उहाँहरुले कुनै स्वार्थ राख्नु भएको छैन । तसर्थ उहाँहरुको माहान भावनाको खुलेर प्रसंसा गर्नु पर्छ उहाँहरुका कार्यहरुमा जे जस्तो अवस्थामा भए पनि साथ दिनु पर्छ । यसैमा नेपाल र नेपालीको हित हुने छ ।
← फोहोर व्यवस्थापन प्रयासका १८ बर्ष, ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण भएपनि परियोजना सञ्चालनमा अझै आशंका
कार्यालयमै कर्मचारीको मृत्यु →